Ho lasa mpandeha Uber ao Dubai - Guide to Careem sy RTA amin'ny asa
Vacancies asa ivelany any Dubai City
Ho lasa mpandeha Uber ao Dubai
Ho lasa mpandeha Uber ao Dubai. Mba ho lasa mpamily Uber ao Dubai. Job seekers tsy maintsy manana record firy fiara madio. Amin'ny lafiny iray, miasa amina orinasa limousine na serivisy anaty fiara ianao Dubai. Ary mahafeno ny fepetra takelaka ambany indrindra amin'ny 21. Ny mpamily mahay dia tsy maintsy mijery horonantsary fiofanana fohy koa. Ny fanodinkodinina ilaina dia fahazoan-dàlana Dubai mitondra fiara ho an'ny United Arab Emirates ary ID Emirates na porofo fonenana. Izany dia ahafahan'ny mpamily mahazo vola amin'ny fomba mety aminy.
Ahoana ny hanombohana an'i Uber ao Dubai?
Tari-dàlana haingana hanombohana an'i Uber?
Dingana No.1 - Avereno an-tserasera amin'ny Uber
Mila manomboka adiresy mailaka sy finday iray fotsiny ianao! Tsara izany, lazao amin'ny orinasa Uber bebe kokoa momba ny tenanao sy ny traikefanao mitondra fiara, ary ny orinasa dia hanomboka anao.
Dingana No.2 - Raiso ny ID anao sy ny fampahalalana sasantsasany
Araka ny miahiahy anao dia misy antontan-taratasy mila arahinao hanohizana. Misy antontan-taratasy vitsivitsy izay tokony jerena ny orinasa uber alohan'ny hamerenana ny fangatahanao.
Raha mpamily ianao ao Dubai na Abu Dhabi ao Emirà Arabo Mitambatra:
Tokony hanana Emirates Emirates ianao
Vehivavy nomerao Vehivavy nisoratra anarana Mulkiya
Tsy maintsy manana sarimihetsika sarimihetsika ianao ary alefaso any amin'ny orinasa Uber.
Tokony ho sary mifanentana akaiky, misy ny sarin'ny fiara feno sy ny soroka ambony, tsy misy solomaso
Tokony ho sary fotsiny ny mpamily izay tsy misy lohahevitra hafa ao anatin'ilay sary, mazava tsara, ary mifantoka. Tsy mety ho sary fahazoan-dàlana fahazoan-dàlana na sary hafa natao printy.
Dingana No.3 - Mitadiava baolina ambany / solika ary vonona handeha haingana!
Inona no fiara tsara indrindra ho anao? Azo antoka fa fiara kely maotera mora vidy. Ankoatra izany, ho azo antoka fa mahafeno ny fepetra takian'ny Uber sy fenitra izay ampiharina ao amin'ny United Arab Emirates.
Miezaha ho malina ary tadidio foana !. Ampiasao bebe kokoa ny dirham raha mitazona ny fandaniana amin'ny fiara ianao amin'ny fihenanam-bola.
Na izany aza, eny, mbola afaka manoratra ianao na dia tsy manana fiara mety aza ianao amin'izao fotoana izao. Jereo ny antsika Uber fiara vahaolana.
🚕 FANAZAVANA FANATSARANA
Dingana No.4 - Avelao ny kaontinao ary ataovy Uber vola!
Ankehitriny, raha nahavita ianao hanaraka ny torolalana eto Dubai ary nahavita ny dingana rehetra etsy ambony. Tokony ho afaka mahazo asa any Uber ao Dubai ianao. Vetivety vetivety i Uber dia ampiharo ny kaontinao ianao dia ho vonona ny hamindra ny kaontinao ny ankamaroan'ny tranga maka 24h hatramin'ny 48h ary hanomboka hanao dirham ianao.
Ny fomba hahatongavana ho Driver Uber ao Dubai
Betsaka ireo miasa ao Dubai. Ho an'ny flexibilité sy ny fizakan-tena dia mety ho safidy tsara indrindra i Uber. Mba hahazoana mpiasa any Dubai, tsidiho ny tranokala Uber. Ny fanaovana sonia dia mora tahaka ny famitana ny fisoratana anarana amin'ny aterineto. Tonga mpidoroka Uber any Dubai tranga sasany mitaky fotoana. Etsy ankilany, ora maromaro izay tsy hanaovanao latsaky ny karama ambany indrindra.
Saingy tsy mila manana lisansa mpamily fiarakaretsaka ianao ary afaka mitondra fiara amin'ny orinasa hafa toa an'i Kareem taxi any amin'ny faritra Gulf. Araka izany, raha vao manomboka mahazo traikefa ianao ho hitanao ny fomba hahazoana vola tsara.
Ahoana no i Uber miasa ao Dubai?
Azonao atao angamba ny mahafantatra ny fomba fampiasana Uber ao Dubai. Toy izany koa amin'ny tontolo hafa, mampiasa Uber, misintona fotsiny ny fampiharana, karohy ny saran-dàlanao, ary misafidy ny karazana tadiavin'ny Uber any Dubai izay tianao. Ny fandoavam-bola dia atao amin'ny alàlan'ny fampiharana ary nafindra avy hatrany. Misy ambaratonga telo ny Uber ao Dubai - ny mpampiasa dia a serivisy serivisy ary manolotra fiara lafo vidy amin'ny taha ambony kokoa; Uber mainty izay serivisy Uber tany am-boalohany; UberXL izay ho an'ny vondrona lehibe na ny filàna fiara lehibe fotsiny. Midika izany fa ny Uber Dubai dia manolotra andian-dahatsoratra avy fenitra amin'ny fitsangatsanganana mahazatra.
Uber dia misy 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro. Amin'ny fampiasana ilay rindrambaiko, ny mpitaingina dia afaka mangataka Uber amin'ny fotoana iray na amin'ny alina. Ny fampiharana dia hampiseho ny mpitaingina ny sarin'ny mpamily sy ny antsipirian'ny fiara, izay manome antoka ny fiarovana ny antoko roa amin'ny fotoana rehetra. Misy ihany koa ny fahafahana manara-maso ny mpamily amin'ny fotoana tena hahitana rehefa tonga izy ireo.
Ny vidin'ny taxi iray ao Dubai dia manodidina ny 44 AED (Arab Emirates Dirham) ho an'ny 10 miles. Miaraka amin'ny Uber, dia akaiky kokoa ny 28 AED amin'ny halavirana mitovy. Ny salanisan'ny Uber ao Dubai dia manodidina ny 30-50 AED isan'ora.
Ahoana ny fomba fidianao Uber, mpamily?
Ny fampiharana finday Uber dia mandefa ny fangatahana fitaterana ho an'ny mpamily any an-toerana. Ny iray amin'ireto mpamily ireto dia hanaiky ny asa ary manangona anao ho any amin'ny alehanao Noho ity rafitra ity, tsy afaka mampifanaraka anao amin'ny mpamily manokana i Uber. Aorian'ny dianao, misy safidy hanombanana ny mpamilinao amin'ny fanomezana valiny tsy fantatra anarana. Uber avy eo afaka mampiasa izany fampahalalana izany hahazoana antoka fa mijanona amin'ny ambaratonga andrasana ny serivisy. Ho lasa mpandeha Uber ao Dubai dia mendrika izany.
Inona moa ny UberXL?
Uber manana tolotra maromaro. Ny iray amin'ireo ohatra dia Uber XL. Izany dia tolotra miavaka amin'ny orinasa Uber. Uber XL dia serivisy fiara tsy dia mahafa-po izay ahafahanao mitondra fiara SUV sy fiara lehibe lavitra noho ireo marika.
Inona moa ny UberXL? Orinasa goavam-be iray manokana manokana ho an'ny uber izany. Ka rehefa miara-miasa amin'io orinasa io ianao dia miaraka amina olona iray ao anaty fiara iray izay azo antoka. UberXL dia karazana saram-pitaovana tsotra kokoa azonao omena ny mpanjifa.
Azonao atao tokoa ny manampy ny olona tsy mandoro vola ao anaty paosy lavaka, UberXL no serivisy fiara azonao omena anao. Mandritra ny fiasana ao amin'ny Uber XL dia hoentina mpanjifa ao anaty SUV na minivan ianao. Ny ankamaroan'ireny fiara ireny dia mety mifanaraka amin'ny 6-8 farafaharatsiny mba toy izany tsara ho an'ny fety na fivorian'ny mpianakavy.
Ahoana no maha-mpamily Uber?
Hatramin'ny nandefasana azy tamin'ny volana Aogositra 2013, Uber in ny Emirà Arabo Mitambatra dia efa nivoaka tamin'ny tanjaka hahery. Raha ny fampahalalana an-tserasera an-kalalahana an-tserasera dia milaza fa ny Uber dia takiana amin'ny fiampangana 30% mihoatra ny taksi-pahefana mahazatra, ny angon-drakitra hafa misy koa amin'ny Internet dia manondro fa ny vidin-tsolika manokana ataon'i Uber dia mifanaraka amin'ny toeran-kafa any amin'izao tontolo izao, ary mora kokoa noho ny taxi 'normal' izay zavatra Uber dia mametraka ny maodelon'izy ireo, ary mirehareha.
Noho ny lalàna milaza fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny orinasa iray any Limousine ny mpitaingina Uber, dia tsy maintsy mizara ny saramany amin'ny mpampiasa azy sy Uber ny mpamily, izay midika fa tsy afaka manao azy ireo araka izay tratrany izy ireo raha tsy tokony hatao. Midika koa izany fa matetika ny mpamily Uber nanao fifanekena hiasa toy ny sesitany Indiana, ary miditra amin'ny Uber mandritra ny fotoana mora kokoa. Mazava ho azy, midika izany fa tsy i Uber akory no hany vola azony andrasana, ka mahatonga azy ireo ho sarotra kokoa ho an'ny mpamily amin'ny ankapobeny.
Tsy toy ny tolotra taxi mahazatra ny mpitaingina Uber tsy mila mandoa ny vidin'ny mpividy ho an'ny Uber mba hiasa, ary tsy manantena ny hiasa ora maromaro izy ireo. Miaraka amin'ny Uber, ny mpamily dia mametraka ny fandaharam-potoanany manokana ary afaka miasa araka izay tratrany na kely araka izay tiany.
Manomboka amin'ny Uber
Ampiharo Here: https://www.uber.com/drive/requirements/
Ahoana ny fiara miaraka amin'i Uber any Emirà Arabo Mitambatra ?. Ny orinasa Uber dia manana fomba tena tsotra hanombohana ny asa mahatalanjona ataony. Manaova hira fotsiny ao amin'ny tranonkalany ary afaka mandeha ianao !.
Uber any Dubai dia fomba iray lehibe mba ho tompon'andraikitra anao manokana ary mahazo vola amin'ny tsena tena sarotra toa ny UAE. Tsy vitan'ny hoe ho faly ianao fa ny ankamaroan'ny olona dia afaka mitondra fiara miaraka amin'i Uber. Ary efa mitady vola miaraka amin'ny uber ao Dubai. Ohatra, Ny Indiana sy ny Pakistaney dia efa mahazo vola amin'ny alàlan'ny miasa amberina any Dubai.
Raha ny tena izy dia mila mahafantatra be loatra ianao raha mizaha any Dubai na Abu Dhabi miaraka amin'i Uber. Ary ireo tanàna ireo dia toerana mahafinaritra satria saika 24h mety hahazo vola.
Ny orinasa hafa toy ny Uber tokony hiezaka ny hiara-hiasa
Captain Careem (Dubai)
Ampiharo Here: https://drive.careem.com/
Careem Kapiteny dia orinasa iray hafa mendrika ny hijery azy. afaka miasa ianao mitovy amin'ny mpamily Uber miaraka amin'ny kapitenin'ny Careem.
1. Soraty ao amin'ny tranonkala ny tenanao: Avy eo dia fenoy ny endrika eo amin'ny tampon'ny tranonkala fa mora ary mihatra amin'ny kajiana Careem.
2. Rehefa mahazo antso an-telefaona avy amin'ny ekipany ianao dia tokony hanana fiofanana fototra tena izy. Rehefa tapitra ny famerenana ny fangatahanao ny orinasan-draharahan'ny komity, dia manasa anao hanao fotoam-pianarana.
3. Mandeha ary mahazo vola any Dubai. Rehefa feno ny fiofanana dia afaka manomboka mahazo vola ianao!.
Manomboka amin'ny Careem Captain androany!
Ampiharo Here: https://talixo.com/careers/
Ny bokin'ny orinasa Talixo izao dia ny fiarahanao taxi any Dubai. Io no nolazain'ilay tranonkalany ary tena fanambarana marina izany. Miaraka amin'i Talixo dia afaka misafidy taxi ianao, kilasy ekonomika ary varotra asa an-dakilasy.
Ny tanjon'ity orinasa ity dia ny fikambanan'i Talixo dia misy amin'ny tanàna 949 manerantany. Ary dia manome anao izany fanombohana tena mahavonjy amin'ny asanao ho mpamily fiarakaretsaka. Inona no dikan'izany ?. Misy antoka lehibe fa hahazo ny volanao amin'ny fotoana sy amin'ny raharaha mahomby ianao.
Ampiharo Here: https://www.rta.ae/links/special_needs/en/taxi.html
Eny, mitady asa miaraka amin'ny Taxi RTA dia mila miasa kely kokoa ianao. Taxi RTA orinasam-panjakana mifandraika amin'izany izy. Ka tsara tokoa ny fiasana any ary tokony ho tsara daholo ny zava-drehetra miaraka amin'ny karama ary famonjena ny asa no homena.
Fa amin'ny lafiny iray, ny fikatsahana asa miaraka amin'ny taxi RTA dia azo antoka fa ho sarotra sarotra ho tratrarina. Nefa mpitari-dalana - ekipan'ny orinasa City City any Dubai ampaherezo ireo expats hanome antso ho an'ny orinasa ary mangataka azy ireo raha mila fanazavana fanampiny.
Ampiharo Here: https://www.dubaitaxi.ae/en/Careers
Ny asa avo lenta dia manolotra tolotra ambony indrindra amin'ny serivisy taxi ao amin'ny United Arab Emirates. Amin'ny ankapobeny, lasa mpamily Uber ao Dubai dia tsy mitovy amin'ny Dubai Taxi. Amin'ity firehana ity, hanana asa manontolo andro ianao ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia fiara mahatalanjona no mitondra fiara. Ny orinasam-pifandraisana Dubai Taxi dia manolotra fiara toa an'i Tesla sy Mercedes ao amin'ny andian'izy ireo. Ka ny iray amin'ireo teboka tokony ho fantatrao: io orinasa io dia alika ambony amin'ny lalao serivisy fitokana-monina.
Raha manana traikefa amin'ny chauffeur sy mitondra fiara ianao. Tokony hanome fiantsoana azy ireo ianao na hijery ny vaovao farany ao amin'ny tranonkalany. Hatreto dia fantatsika izany orinasa mandoa vola be ho an'ny mpiasa expats.
Ampiharo Here: http://www.oneroadtaxi.com/career.htm
Iray mandeha fiarakaretsaka dia manangona tany Emirates Arabo. Ka raha te-ho anisan'ireo fikambanana mitombo izahay. Tokony hiresaka amin'ity firehana ity ianao. Mitantana ny fiarakaretsaka iray amin'ny lalana manakarama mpiasan'ny mpiasa vaovao.
The Ny orinasa dia mitady expatriates iraisam-pirenena vaovao. Araka izany, ireo mpandraharaha amin'ny firenena rehetra dia afaka miasa toy ny mpamily fiarakaretsaka ao amin'ny orinasany. Na izany aza, raha olona manana finiavana sy tsy mivadika ianao amin'ny fanampiana ny olona hahatratra ny alehany ara-potoana. Mba asio fahitana any amin'ny taxi-làlana iray fialantsasatra ankehitriny any Dubai City.
Miala sasatra aho (Dubai)
Ampiharo Here: http://www.safetransme.com/index.html
Tsara toerana sy super google oriented orinasa. Betsaka ny olona mampiasa io fandaminana io. Ity orinasa ity dia manantena ny fitantanana orinasa. Na izany aza, tsy misy fomba fitadiavana fizarana karama ao amin'ny tranokalany. Saingy, amin'ny ankapobeny miteny, mendrika hanomezana azy ireo manontany fotsiny raha manana fialan-tsasatra izy ireo ho mpamily fiarakaretsaka.
Ampiharo Here: http://www.citytaxi.ae
Orinasa antitra ela ny City Taxi. Tsotra satria naorina ny City Taxi AE tamin'ny taona 1983. Nandritra ny taona maro niasana, ny orinasa dia manam-pahaizana manokana amin'ny serivisy maromaro toy mitondra olona any amin'ny toerana rehetra mankany Dubai sy Abu Dhabi ary koa any ivelany. Mampiasa fiara kely ho an'ny fitaterana ny orinasa.
Ny marika tsara ho an'ity orinasa ity dia manakarama izy ireo. Azonao atao ny mitsidika ny tranokalany sy ampiharo mivantana amin'ny CV eo amin'ny tranokala. Tsidiho fotsiny ny orin'izy ireo na asao fiantsoana azy ireo manokana. Ho faly ny mpitantana ny Taxi Taxi mba hanampy anao hahazo asa satria mpamily fiarakaretsaka tao Dubai.
Ampiharo Here: http://www.arabiataxi.ae/Dubai/en/career.html
Arabia Taxi dia tsy misy ifandraisany amin'ny fahatongavany mpamily Uber any Dubai na Abu Dhabi fa nametraka ity orinasa ity koa izahay ao anaty lisitra. Satria mino fotsiny izahay dia hanampy anao tratrarinao ny tanjonao amin'ny fitadiavana asa any amin'ny tsenan'ny asa any UAE.
Ity orinasa ity dia fikambanana mitombo ao amin'ny UAE. Amin'izao fotoana izao dia izy ireo irery no orinasa afaka manefa tanteraka ho an'ny mpitondra ny fitaterana an-dalambe any Emirates Arabo Mitambatra. Arabia Taxi dia orinasa mendrika hanana fijery tahaka a mety ho tadiavina asa.
Ampiharo Here: http://www.carstaxi.ae/en/public/page/contact
Ity orinasa ity dia tsy mandeha irery any Dubai. Company io kolontsaina arabo tokoa ary miezaka foana ny mandroso amin'ny alàlan'ny fitsipika rehetra izay mihatra amin'ny Emirà Arabo Mitambatra. Ny fiarahana amin'ny fandaminana toy izany dia ahafahanao manatratra safidy misimisy kokoa ho an'ny fiainanao sy ny nofinofy arabo.
Ampiharo Here: https://www.shjtaxi.ae/careers
Orinasa 100% Sharjah mandrafitra orinasa taxi. Na izany aza, io firehana io dia mandeha ao anatiny ao Dubai sy Abu Dhabi ihany koa. Sharjah Mitaky mpamily fiarakodia ao Dubai sy Abu Dhabi ny orinasam-piaramanidina. Fa, ny fahazoan-dàlana maha-zotram-piaramanidina UAE Light. Amin'ny lafiny iray, afaka mihatra ny tompon'ny fahazoan-dàlana GCC Light. Noho izany, ataovy azo antoka fa hanana izany eo an-tananao ianao.
Ity orinasa ity dia mandoa be tsara, afaka mahazo AED ianao. 3,000 / - mankany AED.10,000 / - isam-bolana ao dia miasa mihoatra ny 8h isan'andro. Ary am-pitenenana amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ireo orinasa toa an'io dia azonao atao ny manome azy ireo. Azafady mba jereo ny dikan'ny tranokala anglisy ary Ampiharo fotsiny raha mahaliana hiasa ianao amin'ny maha mpamily fiarakaretsaka.
Ilay mpamily (Dubai)
Ampiharo Here: http://thedriver.ae/contact-us.html
Ny orinasa mitondra ny mpamily taona traikefa eran 'ny Emirà Arabo Mitambatra mpanatitra. Ity orinasam-pifandraisana ity dia manome serivisy Chauffeur tena mahomby sy tokana ho an'ny daholobe an'ny UAE. Noho izany, miorina amin'ny famaritana dia tokony hampihatra asa miaraka aminy ianao.
Orinasa iray dia tena mitovy amin'ny uber-orinasa ao Dubai. ohatra, azonao antsoina ny orinasa mpamily. Ary amin'ny ankapobeny miteny, izy ireo dia haniraka anao hahita toerana hiaingana. Misoratra anarana miaraka amin'ny Dubai Roads and Transport Authority (RTA) izy ireo. Noho izany, mora 100% ary vonjeo ny orinasa izay ahitanao tolotra asa karama tsara.
Ampiharo Here: http://www.tawasul.ae/
Tawasul Taxi dia orinasa natokana ho an'ny mpiasa miteny arabo. Na izany aza, afaka mahita tolotra mahasoa vitsivitsy ianao. Ity orinasa ity dia manome safidy mahazatra ary mila manana fahazoan-dàlana ianao. Azonao atao ny miresaka aminy momba ny fanomezana fiara vaovao. Fa raha izany no izy, dia hahazo vola be kokoa izay azonao antenaina. Na izany aza, ny fiaranao manokana, orinasa tsara io no miasa.
Ampiharo Here: http://indigorentacar.com/contact
Orinasa tsara hanombohana mpamily matihanina jobs in Dubai. Indigo Rent A Car dia mivelona amin'ny serivisy mpanjifa miavaka. Zava-misy izany. Indigo manofa ny lanjan'ny orinasa Car dia tsotra, mampifaly ny mpanjifanao ary tazomina ho faly ny mpiasa. Toa toy ny a tena orinasa tsara ao amin'ny United Arab Emirates.
Ny zavatra rehetra ataon'ny orinasa Indigo dia natao hikorontana amin'ny fiara miaraka amin'ny mpanjifa. Ary marina fa tanjona ireo ny fomba tsara ho an'ny fandraharahana. Ny ankoatr'i Indigo dia nanofa orinasa mpanamory fiara any UAE izay mifantoka amin'ny fanatsarana hatrany ny tsena fiarakaretsaka taxi any Dubai.
Ampiharo Here: http://city555luxury.com/about-us/
Ny City 555 Luxury Transport LLC Manana ny iray amin'ireo tranonkala tsara indrindra. Ity fikambanana ity dia miasa amin'ny 2007. Ary amin'ny ankapobeny, ny hetsika voalohany dia ny fitsangatsanganana an-tsary amin'ny fiara serivisy any Dubai sy Abu Dhabi. Ny olona mandidy ny serivisiny dia avy amin'ny fitsangatsanganana vahinin'ny hotely. Ankoatra izany, miantsena ny trano fivarotana sy ny trano fisakafoanana manerana an'i UAE.
Miara-miasa amin'ny orinasa lehibe maromaro any UAE koa ny orinasa. Noho izany, dia hahita fahafinaretana ary mahasoa indrindra ny fitadiavana asa ho an'ireo mpifindra monina any ivelany na ho an'ny olom-pirenena avy ao Emirates.
Connexion Chauffeur (Dubai)
Ampiharo Here: https://www.limo-uae.com/contactus.htm
Limousine, Fanatanjahantena fiara ary fiara lafo vidy mahatalanjona. An'i chauffeur daholo izany rehetra izany orinasa any Dubai. Ny chauffeurs orinasa dia tokony ho matihanina mpamily voaofana tsara. Ny orinasa dia mirehareha amin'ny fanomezana tolotra tena miavaka ho an'ny mpanjifany. Ka izany indrindra dia mendrika tokoa ny hanomezana azy ireo na alefaso fotsiny ny mailaka misy azy amin'ny fangatahana asa.
Ity orinasa ity izay manolotra serivisy marobe. Na mila fitaterana mankany amin'ny seranam-piaramanidina ao Dubai ny mpanjifany. Na de a fivoriana ara-barotra ao amin'ny iray amin'ireo hotely Abu Dhabi. Ankoatra izany, seminera momba ny fandraharahana na trano fisakafoanana misy marika, ity orinasa ity dia manampy anao miala sasatra ao anatin'ny limousine ary hiaraka aminao amin'ny fomba azo antoka.
Ampiharo Here: http://www.prvtlimousine.com/contact.html
Orinasa iray hafa ao anaty lisitray ny orinasa tsy miankina Limousine any Dubai. The Private Limousine UAE ny fikasana dia miasa amin'ny vinavinan'i Dubai. Ny serivisy lehibe dia novolavolaina tao anatin'ny taona vitsivitsy. Araka izany, amin'ny ankapobeny, miasa miaraka amin'ny orinasa VIP dia asa ambony indrindra.
Miara-miasa amin'ny orinasa tsy miankina Limousine. Ny ankamaroan'ireo mpamily dia hanolotra serivisy voatokana manokana any Dubai sy Abou Dhabi. Ny orinasa dia manome VIP ho an'ny mpanjifany mandritra ny folo taona mahery izao.
Ampiharo Here: http://royalsmartlimousine.com/contact.php
Orinasa miaraka amin'ny BMW Series 7 sy Lexus Es350. Orinasa iray masiaka loatra amin'ny tsenan'ny dia lafo vidy. Royal Smart Limousine orinasa dia safidy tsara miasa any amin'ny tontolo iainana mandehandeha hotely.
Ity orinasa mahagaga ity dia mpikambana ao amin'ny orinasa Rashid Al Jabri ao amin'ny faritra Golfa. Ny orinasa dia naorina tao 2002 avy amin'i Rashid Al Jabri. Ary hatramin'izao dia manofa mpiasa marobe izy ireo.
Orinasa tsara hampitombo ny fahaizanao sy ny traikefanao manokana amin'ny tsenan'ny dia milamina. Tena azo itokisana io fandaminana io, tahirizo raha mandeha. Ary koa mora vonona afaka manakarama mpiasan'ny fitaterana bebe kokoa. Mazava ho azy fa ny orinasa dia mbola mitombo haingana haingana. Ary mampiasa vondron'olona manana varotra eto an-toerana sy iraisam-pirenena.
Wadi Fitateram-bahoaka (Dubai)
Ampiharo Here: https://www.swattransport.ae/
Ny orinasa tsara toerana ahafahanao manana asa. Ny orinasa Transports Wadi Swat dia tsy vitan'ny fandraharahana fiara fiara. Izy ireo no manjary mahazo mpandeha sy mandeha miaraka aminy any anaty fiarandalamby kely.
Ny fitaterana Wadi dia iray amin'ireo orinasan'ny fanofana fiara fitateram-bahoaka any Dubai sy Abu Dhabi. Ianao dia afaka miara-miasa amin'ity fikambanana ity ary manosika ny bus na minivans. Nefa ity orinasa ity dia manakarama expats any UAE. Ka raha mitady orinasa manofa fiara fitaterana any Sharjah, Dubai sy Abu Dhabi ianao, azonao atao ny mangataka asa miaraka amin'ity orinasa ity.
Ampiharo Here: https://www.limoinuae.com/contact
Orinasa mpanofa fiara Limo manana serivisy kilasy avo lenta. Ny orinasa dia manofa mpila ravinahitra any Dubai. Hanana ny Lexus-Toyota ianao ary maro hafa !. Ity orinasa ity dia orinasa tena liana fa homena azy ireo ianao. Ny fomba tsara indrindra dia marina manontany azy ireo fotsiny momba ny toerana banga ary alao haingana araka izay vitanao izany.
Ampiharo Here: https://orangeauto.ae/contact-us/
Ny sarintany Google dia tia orinasa orinasa fiara. Azonao atao ny manamarina ny tenanao fanavaozana momba ny orange auto ao amin'ny google ny mombamomba ny fandraharahako. Orinasa iray miteny matetika dia miasa tsara ao UAE. Ireo orinasam-pitaterana tahaka izany dia mpifaninana tsara amin'i Uber ao amin'ny United Arab Emirates. Tsy orinasa manofa fiara tsy izy ireo izy ireo fa mbola mendrika hangataka asa.
Aza adino ny momba an'i Uber mihinana (Dubai)
Ampiharo Here: https://uber.com/drive/delivery/
Uber Mihinana azy ity amin'ny ampahany Ny Uber Driver asa any Dubai. Afaka miasa amin'ny trano fisakafoanana ianao ohatra Mc.Donald ny na Pizza Hut ary manolotra sakafo ho an'ny olona noana raha manao vola tsara ianao.
Mba hahazoana io karazana asa io Tsy mila mitondra fahazoan-dàlana ianao !. Satria afaka manao izany ianao amin'ny môtô kely kely na eny amin'ny bisikileta aza dia ho azonao tsara rehefa afaka volana vitsivitsy ny asa any !. Noho izany, fomba iray hentitra kokoa ny hoe ho tonga Uber Driver ao Dubai.
Ampiharo Here: https://www.olacabs.com/careers
Ola dia fangatahana fanofa-fiara ary asa lehibe ankehitriny. Mino ny orinasa fa zava-dehibe ny fanavaozana ny tsenan'ny dia. Ny mpiasa fiara manofa fiara dia manao ny tanjona sy ny soatoavina lehibe kokoa nataon'i Ola. Indrindra ny orinasa mitantana orinasa tsara any UK sy India. Ny fanofaam-fiara Ola dia mamporisika ny mpiasany rehetra hanao asa fitadiavam-bola mamolavola indrindra.
Ho iray amin'ny orinasa mizara mpitaingenana lehibe indrindra manerantany amin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana manokana. Ny fanofaam-fiara Ola dia mahazo rehareha amin'ny maha-mpandraharaha, fanandramana ary orinasa vaovao mahomby manerana izao tontolo izao!.
Ampiharo Here: https://www.gocatch.com/
Ny orinasa GoCatch dia serivisy fiarakaretsaka taxi-be any Aostralia. Miaraka amin'ity orinasa ity, safidy maromaro azonao ahafahana mitondra ny fiaranao. Ohatra ny mpamily ny toekarena ary koa ny mpamily fiarakaretsaka na koa mpamily fiara. Na izany aza, ity orinasa ity koa manolotra fiaraha-miasa tsara. Raha manana fiaramanidina manokana ianao dia afaka manofa azy ireo ny mpiasa sy ny fiara.
Ny tranokalan'ny orinasa GoCatch dia ahitana ny mpamily fiarakaretsaka maro an'ny mpamily fiarakaretsaka manana taxi taxi any Australia. The mendrika ny hahazo asa ny orinasa. Ka raha toa ianao ka mitady karazana asa any Uber Internationally. Tena tokony hampihatra amin'ny tranokala Go Catch any Australia ianao.
Ampiharo Here: https://www.kapten.com/
Ny orinasa Kapten dia miasa mandraka androany any amin'ny firenena vitsivitsy. Ohatra, ho hitanao izy ireo any France Paris, Lyon ary Cannes. Ankoatra izany, Sunshine Portugal any Lisbon sy Suisse any Genève. izany ny orinasa dia miasa amin'ny tsena tena mifaninana.
Ny mpamily azy dia matihanina sy tarihiny. Mba hanome ny tolotra tsara indrindra ho an'ny mpanjifa ho an'ny mpanatanteraka matihanina. Nandritra ny fiarahamiasa amin'ity orinasa ity ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia lasa hevi-dehibe ho an'ny karierao.
Fivarotana mpanjifa eo an-toerana, mavitrika ary maro karazana.
Ampiharo Here: https://gett.com
Gett Taxi dia orinasa mitombo ary ny tsena lehibe ho azy ireo dia ny Isiraely, Russia, United Kingdom ary New York. Na izany aza, ity orinasa ity dia tsy voafetra amin'ireto toeran-kafa ireto, satria maniry ny ho lehibe amin'ny hoavy izy ireo. Ka tokony ho azonao antoka mifehy mampihatra amin'ny fizarana tranonkala karamany ary nahazo fijery nanavao ny fanovana vaovao vaovao, ohatra, Dubai na i Abu Dhabi.
Ampiharo Here: https://cabify.com/en/drivers
Miaraka amin'ny Cabify. Fivoriambe malaza manerana izao tontolo izao !.
Ity orinasa ity no safidy voalohany amin'ny saran-dàlana, isa voalohany ho fiarovana. Ary tena orinasa malaza izay manakarama expatriates. Afaka manampy mitaingina olona miaraka amin'ny olona mankany amin'ny seranam-piaramanidina ianao, na amin'ny fivoriana miasa ary mahazo vola amin'ny lafiny rehetra.
Ny fitadiavam-bola ao amin'ity orinasa ity dia amin'ny ankapobeny dia manampy ny olona hahazo miasa na hiverina an-trano. Ny asa Cabify dia ho an'ny mpiasa, mpanjifa na kandida. Misy mahavita mangataka sy mahazo vola.
Miasa amin'ny mpiasa Cabify dia mahafantatra tsara fa ny asa aman-draharaha dia mandeha noho ny antony maro samihafa ary mahatonga ny orinasa amin'ny haavony idia hahazo tombony ho anao irery ianao.
Ampiharo Here: https://www.ingogo.com.au/driver
Ingogo dia afaka mitantana karatra fitarihana smart card izay hanampy anao hanangona sy hamandrihana manokana ho amin'ny ora 48 mialoha mba hahafahanao mamolavola ny andro iainanao. Azonao atao ny mamerina indray ny baiko avy amin'ny mpitantana orinasa sy ny mpanjifan'ny orinasa izay mandoa vola bebe kokoa.
Ny orinasa dia avy any Aostralia ary ny ankamaroan'ny foibem-piantsoana miaraka amin'ny olona tena mila fanampiana dia ho anao. Koa, tokony handinika ny orinasan'i Ingogo ianao ary manomboka
toerana manohana any Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane ary Perth. Manana fanantenana izahay fa tianareo ny tolotr'izy ireo.
Ampiharo Here: https://www.itaxi.pl
Ity orinasa ity dia orinasa malaza indrindra amin'ny mpamily. Azonao atao ny mahita orinasa tsara ao Polonina amin'izao fotoana izao, raha mivoatra ny toekarena. iTaxi dia maimaim-poana ary mora ampiasaina amin'ny fampiharana finday any Polonina. Ary ity orinasa ity mamela anao hiasa ho azy ireo any Polonina. Na izany aza, tsy maintsy miteny ilay fiteny anglisy ianao.
Ny orinasa iTaxi no marika malaza indrindra any Polonina ary miasa ao amin'ireo tanàn-dehibe eran-tany rehetra manome an'i Krakow sy Warsaw izay ahafantaran'ny ankamaroan'ny olona ny vahiny sy ny teny anglisy.
Ity orinasa ity irery no orinasa hanome anao ny fikarakarana hampiasa ary hahazo vola amin'izany fomba izany ianao. Ny iTaxi dia mampifandray ireo mpampiasa tsy misy mpamily efa azo atokisana sy voamarina ao amin'ny tsenan'ny fitaterana polish fotsiny. Afaka milamina ary manao ny zavatrao ianao, eo am-pahatongavana any amin'ilay toerana haleha. Mitady vola any Polonina ary alefaso aminao any izany fianakaviana any ivelany.
Miaraka amin'ny Lyft (International)
Ampiharo Here: https://www.lyft.com/driver
Lyft dia orinasa Amerikana ary malaza be any Etazonia sy Canada. Na dia izany aza, tsy voafetra ho io orinasa io no tsy hifindra any Afovoany Atsinanana.
Lyft dia manana rafitra tena tsara ho an'ny mpamily azy ary azo antoka fa tsara izany fikambanana hiasa rehefa nifindra tany Dubai City izy ireo. Hatreto aloha dia fantatray fa ny orinasa lyft dia mitady hifindra any UAE saingy tsy nanamafy ny daty marina ny orinasa.
Fahalalahan'ny halatra amin'ny zavatra rehetra ataonao, mamela ny asanao ho tsara sy mahazo aina. Ny fanaovana hevitra mirodana amin'ny tany ary manomboka ny fanavaozana sy ny vola miditra ao Etazonia sy Kanada dia mahatonga anao ho olona tsara tokoa.
Ampiharo Here: https://en.lecab.fr/our-services/order-cab-in-paris.html
Lecab Taxi no orinasa Frantsa tahaka an'i Uber ao Dubai. Ny orinasa LeCab no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fiara mpitatitra Paris tsy miankina afa-tsy amin'ireo olona izay mipetraka ao Paris raha ny marina. Noho izany, LeCab dia namorona tolotra iray izay tian'ny Paris any an-tsitrapo: mahazatra, azo itokisana ary mora.
Ity orinasa ity dia niorina tamin'ny 2012 ary nanomboka tamin'izany dia natsangana tamin'ny orinasa vitsivitsy ny orinasa izay manampy ny olona hampiasa ny serivisy toy ny taxi sy uber. LeCab dia manome an'i Paris safidy hafa amin'ny taxi sy fiara manokana. ary mitombo tsy miitatra koa amin'ny teny anglisy.
Ampiharo Here: http://www.bitaksi.com/en/
Mora mitaingina, Bi Taksi dia orinasa iray ny fampandrosoana ho avy. Ity orinasa ity dia serivisy serivisy tsara indrindra any Istanbul sy Ankara any Turkey. Tsy maninona izay misy anao azonao ampiharina na ho tonga any Turkey ary mahazo vola miaraka amin'ny BiTaksi.
Miaraka amin'ny orinasa iray toy izao, amin'ny ankapobeny, dia afaka mangataka fampahalalana bebe kokoa ianao ary mijery azy fa tena misy ny mailaka miaraka amin'ny tolotra asa. Ary ny mpanjifanao dia afaka mandoa vola amin'ny carte de crédit na vola. Mandray olona mpanjifa manan-kilema ihany koa ny orinasa, ho afaka hahazo vola bebe kokoa ianao.
Ampiharo Here: http://talent.didiglobal.com/
Didi dia miasa any amin'ny firenena maro, Aostralia, Brezila, Shina ary i Japon sy Mexico. Ka mendrika izany ho fikambanana iray mila jerena io. Mitady mpitantana za-draharaha izy ireo, nahazo diplaoma eny amin'ny anjerimanontolo ary Interns.
Didi taxi dia orinasa mpitatitra olona tsara ho an'ny expats. Tokony ho jerena ny fahabangany satria be dia be ny liana amin'ny asa atolotra.
Ampiharo Here: https://gettransfer.com/en/carrier/new
Ity orinasa ity dia namindra ny biraony amin'izao fotoana izao mba hanomboka miasa ao Dubai sy Abu Dhabi. Noho izany, azo antoka fa tokony hanana fijerena ny tranonkalany ianao. Manantena izahay fa hisy orinasan'ity orinasa ity any Dubai atsy ho atsy, koa avelao hisokatra ny fangatahana anao with gettransfer.com.
Ny orinasa dia hitovy amin'ny hoe Become a Uber Driver ao Dubai ianao dia haka ny hafatra ary hametraka entana na olona ho an'ny toerana voafidy.
Makà mpiasa famindrana mba hahalala ny lanjan'ny fifantohana am-pamokarana, miasa mafy ary mazoto amin'ny sehatry ny dia manokana. Noho izany, Makà Transfer.com manampy anao tena hiasa hahatratra ny fahitana fototra ary manangana fihetsiketsika ho an'ny olona an'arivony tapitrisa.
Ampiharo Here: http://www.easytaxi.com/
Easy Taxi dia betsaka kokoa ny fampiharana apetraky ny orinasa any Columbia, Argentina ary Mexico. Na izany aza, mendrika hatao ny mandinika azy ireo. Ity orinasa ity dia afaka manokatra birao iray ao Dubai na Abu Dhabi amin'ny taona manaraka ary mifindra amin'ny tsenan'ny Moyen Orient.
Jereo ny safidiny, iza no mahalala mety hanana asa sasantsasany amin'ny mpiasa za-draharaha eran-tany izy ireo. Ary mety efa mahaliana anao ny manomboka miasa any ivelany ho amin'ny Taxi mora.
Ampiharo Here: https://grab.careers/
Orinasa tsara! Ny fikambanan-tsoavaly fiara karama dia mihoatra noho ny fangatahana fangatahana miakatra ao anaty Azia Atsimo atsinanana. Orinasa ity dia orinasa lehibe misy fampiasam-bola midadasika. Ny orinasa mampiasa ny rafitra data farany sy ny teknolojia efa mandroso indrindra hanatsarana ny zava-drehetra manomboka amin'ny fitaterana mankany amin'ny fandoavam-bola sy ny logistic manerana an'i Azia Atsimo Atsinanana.
Ny orinasa Grab dia miara-miasa akaiky amin'ireo tetikasam-panjakana sy rafitra. Toy izany koa ny mpamily azy ireo, sambatra ny mpandeha sy ny fiantrana. Toa araka ny endriny tsara ny miasa amim-pifaliana ao amin'ity orinasa ity.
Tadiavo ny tanjon'ny governemanta mba hamahàna ny tanjona mety ho an'ny faritra Azia amin'ny alalan'ny fanampiana ny olona Ho tonga mpihazona Uber ao Dubai (karazana) karazana asa iray.
Mamaha ireo olana mifehy ny fihoaram-pefy tafahoatra izy ireo. Raha mizara vina amina orinasa mitondra fiara any Azia Atsimo Atsinanana ianao, ampiharo mba hanatevin-daharana ny ekipany anio.
Ampiharo Here: https://careers.taxify.eu/
Taxify dia orinasa faharoa taorian'ny kamboty. Orinasa mivarotra dia manome mpifaninana tena mahasoa an'i Uber. Amin'ny ankapobeny dia olona maro no mampiasa an'io orinasa io eran'izao tontolo izao. Raha maka ity mpikarakara ity isika dia hampitahainay amin'ny orinasa Uber. Azo antoka fa hahazo fikambanana mitombo tsara izay ahazoanao mahazo asa any amin'ny United Arab Emirates ihany koa. Mandritra izao fotoana izao, io orinasa io dia manana localization mihoatra ny roa-tanana.
Hevitra iray manan-tsaina amin'ity orinasa ity fa ny hetsika tsy mampiasa carte de crédit raha tsy miaraka aminao ny safidy fandoavam-bola izay azonao iresahana amin'ny ankapobeny, dia manohy mitondra fiara sy mandoa vola izany any aoriana any. Ka raha ampitahainay amin'ny orinasa taxi ity orinasa ity dia hiteny izany izahay dia toerana tsara ahafahana miasa miaraka.
Ity orinasa ity dia miorina amin'ny firenena Eropeana any Estonia izay manana ny lohany ao. Fa raha ataonay kosa izy ireo dia miasa any ivelany any India Etazonia Etazonia Canada ary firenena maro ao amin'ny Vondrona Eropeana. Ka raha mitady asa any ivelany ianao ity orinasa ity azo antoka fa fomba marani-tsaina hahazoana asa.
Alohan'ny handehananao? - Dingana Demerit ao Dubai!
Ao Dubai, ny teboka farany dia marika eo amin'ny fahazoan-dàlanao mitondra fahazoan-dàlana ao Dubai noho ny fandikan-dalàna natao nandritra ny fiara. Raha mieritreritra ny ho tonga mpamily Uber ianao dia mila mandinika Ahoana no hanamarinana ny habetsahan'ireo lamandy ireo?. Izany dia azo atao amin'ny fanaraha-maso ny antontan-taratasy na ny fifandraisana amin'ny Roads & Transport Authority izay manome ny fahazoan-dalana mitondra. Ho mora kokoa ny ho tonga mpihazona Uber ao Dubai miaraka amin'ny orinasa misy anay.
Noho izany, raha mitady ianao tsara asa toerana. Satria na dia mety hahita fahafahana iray mpamily aza. Ianao dia tokony Jereo ny birao eo an-toerana. Ary avy eo dia misy asa tsara ho an'ny mpamily. Mirary anao ho tsara vintana.
Manantena ianareo fa hahita asa any Drày any Dubai
Na izany aza, isika dia manamboatra ny Driver Job any UAE
Find a Job in Dubai miaraka amin'ny orinasa mahagaga Azonao atao ny mahita an'io asa nofinofy io amin'ny fomba haingana amin'ny famoahana ny famerenana amin'ny orinasa.
Ampidiro tsotra izao ny resume ary manomboha a Drobo Job vaovao any Dubai.
Afeno ny famerenana Ho any Amin'ny Tanàna Manan-dampana Lavitra Indrindra! - Dubai City Company.